ဖခင်ကိုယ်တိုင် အမှန်တရားကို ပြောပြတဲ့ ကျိုင်းတုံမှာမီးရှို့အသတ်ခံရမှုမှနောက်ဆက်တွဲသတင်း – Lat Khat Than
ဖခင်ကိုယ်တိုင် အမှန်တရားကို ပြောပြတဲ့ ကျိုင်းတုံမှာမီးရှို့အသတ်ခံရမှုမှနောက်ဆက်တွဲသတင်း
တရာခံ စိုးလွင်​ ဇနီးသည်​မှာ ဆရာမ တစ်​ဦးဖြစ်​ပါတယ်​.ဆရာမ နဲ့ ​အဲ့​ကောင်​မ​လေး ရင်းနှီးတယ်​လို့ကောင်​မ​လေး အ​ဖေက ​ပြောခဲ့ပါတယ်​ဆရာမက အဲ့​ကောင်​မ​လေးဆီ ပိုက်​ဆံ ၃ သိန်း​တောင်​​ချေးထားပါတယ်​.ဘာအမျုိးမှ မ​တော်​ပါဘူးလို့လည်းကောင်​မ​လေး အ​ဖေက ​ပြောပါတယ်​. ​ဒီလ​တောင်​ ၅ ​သောင်း​ထပ်​​ချေးပြီး ၂​သောင်းပဲပြန်​ဆပ်​​သေးတယ်​လို့ ​ပြောပါတယ်​
အမှု ဖြစ်​​နေစဉ်​ စိုးလွင်​ရဲ့ ဇနီး ဆရာမဟာ မိုင်း​ယောင်း​ရောက်​ရှိ​နေပါတယ်​
ကောင်​မ​လေး ဟာ ​ကျောက်​တိုင်​အနီး ပါဝါ မျက်​မှန်​ဆိုင်​မှာ၁ လ ကို ၁သိန်းခွဲ နဲ့အလုပ်​လုပ်​​နေတာပါ
တရားခံ စိုးလွင်​ဟာ ကြိုတင်​ကြံစည်​ထားခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​
စိုးလွင်​ သူ့မိန်းမ ခရီးထွက်​​နေခြင်းကို အခွင့်​​ကောင်းယူခဲ့ပါတယ်​
ဖုန်းဆက်​ကာ ​ကောင်​မ​လေးအားနင့်​ ဆရာ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတယ်​.လာကြည့်​အုံး ပြီး​တော့ငါးကင်​​လေးပါ ဝယ်​လာခဲ့နှစ်​​ကောင်​ဝယ်​ခဲ့ နင်​စားမယ်​ဆို ၃ ​ကောင်​ ဝယ်​ခဲ့လို့​ပြောပါတယ်​
ငါးကင်​လာပို့ချိန်​မှာ ​ကောင်​မ​လေး၏ သူငယ်​ချင်းလည်း ပါလာပါတယ်​ သူ့ က အိမ်​ပြင်​က​နေ ရပြီဆိုပြီး လှည့်​ပြန်​ပါတယ်​
အိမ်​ထဲ​ရောက်​​တော့ ဆရာမကအခန်းထဲမှာဆိုပြီး ​ကောင်​မ​လေးအဝင်​ တံခါးဂျက်​ ကို ထိုးလိုက်​ပါတယ်​ တရားခံစိုးလွင်​ နဲ့ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ နဲ့ အခန်းမှာရှိ​နေပါတယ်​
တရားခံစိုးလွင်​က အရင်​ မဒိန်းကျင့်​တယ်​လို့ ရဲစခန်းမှာလည်းဝင်​ခံထားပါတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​သတင်း​တွေထဲမှာ ​ဖျောက်​ထားခြင်းခံရပါတယ်​
တရားခံ စိုးလွင်​ က မဒိန်းကျင့်​တယ်​ ပြီး​တော့ သူ့တပည့်​ကထပ်​ မဒိန်းကျင့်​ခဲ့ပါတယ်​
တရားခံစိုးလွင်​ကို စစ်​​ဆေးရာခန္ဓာကိုယ်​ မှာ ​ကောင်​မ​လေးခါးကို လက်​သည်းကုပ်​ပြီးရုန်းကန်​ထား တဲ့ လက်​သည်းရာကျန်​ရှိ​နေပါတယ်​
ကောင်​မ​လေး ထွက်​​ပြေးမှာဆိုးသဖြင့်​ ဂုတ်​ ကို တုတ်​ဖြင့်​ တစ်​ချက်​ ​ခေါင်းကို တစ်​ချက်​နှစ်​ချက်​ ဒဏ်​ရာ ရထားပုံပဲလို့ ​ပြောပါတယ်​
ကောင်​မ​လေးဟာ တရားခံစိုးလွင်​အိမ်​အထဲ က ​သေ​နေပြီ ဖြစ်​ပါတယ်​ ​​
အဲ့ဒါနဲ့ ည ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင်​မှာဆိုင်​ကယ်​ဖြင့်​ အ​လောင်းကိုသယ်​သွားပြီး လွယ်​​မွေလမ်းမှာပဲဓာတ်​ဆီ ၂ဂါလံ နဲ့ မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်​​လောင်​ပြီးမှ ​ဂျောက်​ ထဲကိုကန်​ချခဲ့ပါတယ်​လို့ ​ပြောပါတယ်​ဖြစ်​ချင်​​တော့ ​ဂျောက်​က နက်​တယ်​ဗျ ​အောက်​ထိ မကျပဲ အ​ပေါ်မှာတင်​ ​နေခဲ့ပါတယ်​
ကောင်​မ​လေး၏ ချစ်​သူဟာ ဖုန်းဆက်​ပြီး ဘယ်​သွားစရာရှိလည်း ​မေး​တော့ အဲ့​နေ့မှာ ဆရာမကို ငါးကင်​သွားပို့မယ်​​ပြောပါတယ်​
ညကျ​တော့ ထပ်​ဆက်​ပါတယ်​စက်​ပိတ်​ထားလို့​ပြောပါတယ်​နောက်​ရက်​လည်း ထပ်​ဆက်​တယ်​ပိတ်​ထားတယ်​​ပြော​တော့ကောင်​မ​လေး ၏ ချစ်​သူကရဲစခန်းမှာ အမှု ဖွင့်​ခဲ့ပါတယ်​
အဲ့အချိန်​မှာ မီး​လောင်​မှု နဲ့ ​တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ​ကောင်​မ​လေး၏လက်​စွပ်​ အသဲပုံ​လေးရယ်​ကောင်​​လေးဆီက အသဲပုံ​လေးရယ်​တူ​နေသဖြင့်​ သိလိုက်​ရပါသည်​
ကောင်​​လေး သူ့ချစ်​သူ၏ မိဘလည်းမသိ အိမ်​လည်းမသိသဖြင့်​ facebook မှတ်ပုံတင်​ရာမှ ​ကောင်​မ​လေး မိဘသိခဲ့​ကြောင်းသိရပါတယ်​
တရားခံ စိုးလွင့်​ နှင့်​ သူ့တပည့်​ဟာယိုးဒယား ဆိုင်​ကယ်​ Wave အဖြုကိုပါ ခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်​
ကို စနစ်​တကျ လုပ်​​ဆောင်​ခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​ ​သေဒဏ်​​ပေးသင့်​ပါတယ်​လို့ အ​ဖေ ဖြစ်​သူက​ပြောလာပါတယ်​
သမီး အတွက်​ အမှန်​တရားကိုပြောခဲ့တယ်​ ပြီး​တော့ ​မီး​လောင်​​ထား​သော ​ကောင်​မ​လေး၏​ခြေသည်းနီ ခဲ​ရောင်းဆိုးထား​သော
ခြေ​ထောက်​​လေး မှာ မီး​လောင်​မှုမရှိခဲ့ပါဘူး အ​ဖေ ဖြစ်​သူကငိုပြီး ခု​တော့ အဲ့ လက်​သည်းဆိုး​ဆေးက စာပွဲ​ပေါ်မှာ အဲ့တိုင်း​လေးပဲ စာအုပ်​​လေးကလည်း ဖွင့်​လျှက်​​လေး ဟု ​ပြောပါတယ်​သားသမီး ၅ ​​ယောက်​အနက်​
တတိယ သမီးဖြစ်​ပါတယ်​လို့​ပြောပါတယ်​ ၁၀ တန်းတတ်​​နေတာပါတဲ့ အသက်​က​တော့ ၁၈ပါ ဆိုင်​ကယ်​ ဝယ်​​ပေးထားတာ၁ လ ပဲရှိပါ​သေးလို့​ပြောပါတယ်​
အ​ဖေဖြစ်​သူက ​တောင်​ယာလက်​သမား . စစ်​မှုထမ်း​ဟောင်းကြီးဖြစ်​ပါတယ်​။ သတင်းအမှန်​ကိုအ​ဖေကိုယ်​တိုင်​ ​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်​။
Ref : Aung Myat Lin Tun
တရာခံ စိုးလှငျ​ ဇနီးသညျ​မှာ ဆရာမ တဈ​ဦးဖွဈ​ပါတယျ​.ဆရာမ နဲ့ ​အဲ့​ကောငျ​မ​လေး ရငျးနှီးတယျ​လို့ကောငျ​မ​လေး အ​ဖကေ ​ပွောခဲ့ပါတယျ​ဆရာမက အဲ့​ကောငျ​မ​လေးဆီ ပိုကျ​ဆံ ၃ သိနျး​တောငျ​​ခြေးထားပါတယျ​.ဘာအမျြုိးမှ မ​တျော​ပါဘူးလို့လညျးကောငျ​မ​လေး အ​ဖကေ ​ပွောပါတယျ​. ​ဒီလ​တောငျ​ ၅ ​သောငျး​ထပျ​​ခြေးပွီး ၂​သောငျးပဲပွနျ​ဆပျ​​သေးတယျ​လို့ ​ပွောပါတယျ​
အမှု ဖွဈ​​နစေဉျ​ စိုးလှငျ​ရဲ့ ဇနီး ဆရာမဟာ မိုငျး​ယောငျး​ရောကျ​ရှိ​နပေါတယျ​
ကောငျ​မ​လေး ဟာ ​ကြောကျ​တိုငျ​အနီး ပါဝါ မကျြ​မှနျ​ဆိုငျ​မှာ၁ လ ကို ၁သိနျးခှဲ နဲ့အလုပျ​လုပျ​​နတောပါ
တရားခံ စိုးလှငျ​ဟာ ကွိုတငျ​ကွံစညျ​ထားခွငျးဖွဈ​ပါတယျ​
စိုးလှငျ​ သူ့မိနျးမ ခရီးထှကျ​​နခွေငျးကို အခှငျ့​​ကောငျးယူခဲ့ပါတယျ​
ဖုနျးဆကျ​ကာ ​ကောငျ​မ​လေးအားနငျ့​ ဆရာ ​နမေ​ကောငျးဖွဈ​​နတေယျ​.လာကွညျ့​အုံး ပွီး​တော့ငါးကငျ​​လေးပါ ဝယျ​လာခဲ့နှဈ​​ကောငျ​ဝယျ​ခဲ့ နငျ​စားမယျ​ဆို ၃ ​ကောငျ​ ဝယျ​ခဲ့လို့​ပွောပါတယျ​
ငါးကငျ​လာပို့ခြိနျ​မှာ ​ကောငျ​မ​လေး၏ သူငယျ​ခငျြးလညျး ပါလာပါတယျ​ သူ့ က အိမျ​ပွငျ​က​နေ ရပွီဆိုပွီး လှညျ့​ပွနျ​ပါတယျ​
အိမျ​ထဲ​ရောကျ​​တော့ ဆရာမကအခနျးထဲမှာဆိုပွီး ​ကောငျ​မ​လေးအဝငျ​ တံခါးဂကျြ​ ကို ထိုးလိုကျ​ပါတယျ​ တရားခံစိုးလှငျ​ နဲ့ ​နောကျ​တဈ​​ယောကျ​ နဲ့ အခနျးမှာရှိ​နပေါတယျ​
တရားခံစိုးလှငျ​က အရငျ​ မဒိနျးကငျြ့​တယျ​လို့ ရဲစခနျးမှာလညျးဝငျ​ခံထားပါတယျ​ ဒါ​ပမေယျ့​သတငျး​တှထေဲမှာ ​ဖြောကျ​ထားခွငျးခံရပါတယျ​
တရားခံ စိုးလှငျ​ က မဒိနျးကငျြ့​တယျ​ ပွီး​တော့ သူ့တပညျ့​ကထပျ​ မဒိနျးကငျြ့​ခဲ့ပါတယျ​
တရားခံစိုးလှငျ​ကို စဈ​​ဆေးရာခန်ဓာကိုယျ​ မှာ ​ကောငျ​မ​လေးခါးကို လကျ​သညျးကုပျ​ပွီးရုနျးကနျ​ထား တဲ့ လကျ​သညျးရာကနျြ​ရှိ​နပေါတယျ​
ကောငျ​မ​လေး ထှကျ​​ပွေးမှာဆိုးသဖွငျ့​ ဂုတျ​ ကို တုတျ​ဖွငျ့​ တဈ​ခကျြ​ ​ခေါငျးကို တဈ​ခကျြ​နှဈ​ခကျြ​ ဒဏျ​ရာ ရထားပုံပဲလို့ ​ပွောပါတယျ​
ကောငျ​မ​လေးဟာ တရားခံစိုးလှငျ​အိမျ​အထဲ က ​သေ​နပွေီ ဖွဈ​ပါတယျ​ ​​
အဲ့ဒါနဲ့ ည ၁၀ နာရီ ဝနျးကငျြ​မှာဆိုငျ​ကယျ​ဖွငျ့​ အ​လောငျးကိုသယျ​သှားပွီး လှယျ​​မှလေမျးမှာပဲဓာတျ​ဆီ ၂ဂါလံ နဲ့ မီးရှို့ခဲ့ပါတယျ​​လောငျ​ပွီးမှ ​ဂြောကျ​ ထဲကိုကနျ​ခခြဲ့ပါတယျ​လို့ ​ပွောပါတယျ​ဖွဈ​ခငျြ​​တော့ ​ဂြောကျ​က နကျ​တယျ​ဗြ ​အောကျ​ထိ မကပြဲ အ​ပျေါမှာတငျ​ ​နခေဲ့ပါတယျ​
ကောငျ​မ​လေး၏ ခဈြ​သူဟာ ဖုနျးဆကျ​ပွီး ဘယျ​သှားစရာရှိလညျး ​မေး​တော့ အဲ့​နမှေ့ာ ဆရာမကို ငါးကငျ​သှားပို့မယျ​​ပွောပါတယျ​
ညကြ​တော့ ထပျ​ဆကျ​ပါတယျ​စကျ​ပိတျ​ထားလို့​ပွောပါတယျ​နောကျ​ရကျ​လညျး ထပျ​ဆကျ​တယျ​ပိတျ​ထားတယျ​​ပွော​တော့ကောငျ​မ​လေး ၏ ခဈြ​သူကရဲစခနျးမှာ အမှု ဖှငျ့​ခဲ့ပါတယျ​
အဲ့အခြိနျ​မှာ မီး​လောငျ​မှု နဲ့ ​တှခေဲ့ရတဲ့ ​ကောငျ​မ​လေး၏လကျ​စှပျ​ အသဲပုံ​လေးရယျ​ကောငျ​​လေးဆီက အသဲပုံ​လေးရယျ​တူ​နသေဖွငျ့​ သိလိုကျ​ရပါသညျ​
ကောငျ​​လေး သူ့ခဈြ​သူ၏ မိဘလညျးမသိ အိမျ​လညျးမသိသဖွငျ့​ facebook မှတျပုံတငျ​ရာမှ ​ကောငျ​မ​လေး မိဘသိခဲ့​ကွောငျးသိရပါတယျ​
တရားခံ စိုးလှငျ့​ နှငျ့​ သူ့တပညျ့​ဟာယိုးဒယား ဆိုငျ​ကယျ​ Wave အဖွုကိုပါ ခိုးယူသှားခဲ့ပါတယျ​
ကို စနဈ​တကြ လုပျ​​ဆောငျ​ခွငျးဖွဈ​ပါတယျ​ ​သဒေဏျ​​ပေးသငျ့​ပါတယျ​လို့ အ​ဖေ ဖွဈ​သူက​ပွောလာပါတယျ​
သမီး အတှကျ​ အမှနျ​တရားကိုပွောခဲ့တယျ​ ပွီး​တော့ ​မီး​လောငျ​​ထား​သော ​ကောငျ​မ​လေး၏​ခွသေညျးနီ ခဲ​ရောငျးဆိုးထား​သော
ခွေ​ထောကျ​​လေး မှာ မီး​လောငျ​မှုမရှိခဲ့ပါဘူး အ​ဖေ ဖွဈ​သူကငိုပွီး ခု​တော့ အဲ့ လကျ​သညျးဆိုး​ဆေးက စာပှဲ​ပျေါမှာ အဲ့တိုငျး​လေးပဲ စာအုပျ​​လေးကလညျး ဖှငျ့​လြှကျ​​လေး ဟု ​ပွောပါတယျ​သားသမီး ၅ ​​ယောကျ​အနကျ​
တတိယ သမီးဖွဈ​ပါတယျ​လို့​ပွောပါတယျ​ ၁၀ တနျးတတျ​​နတောပါတဲ့ အသကျ​က​တော့ ၁၈ပါ ဆိုငျ​ကယျ​ ဝယျ​​ပေးထားတာ၁ လ ပဲရှိပါ​သေးလို့​ပွောပါတယျ​
အ​ဖဖွေဈ​သူက ​တောငျ​ယာလကျ​သမား . စဈ​မှုထမျး​ဟောငျးကွီးဖွဈ​ပါတယျ​။ သတငျးအမှနျ​ကိုအ​ဖကေိုယျ​တိုငျ​ ​ပွောကွားခဲ့ပါတယျ​။
ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကလေးငယ် (၁) ဦးအားအခကြေးငွေယူ၍ စစ်တွေမှရန်ကုန်သို့ ပို့ဆောင်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
တပ်​မဟာ (၃) အမည်​​ပေါက်​ ပွိုင့်​ကုန်း နှစ်​ကုန်းအား ညက်​ညက်​​ချေ သိမ်းပိုက်ခဲ့